Jubbaland oo sheegtay in howlgal ay ka sameeyeen deegaanno ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. – Banaadir Times
By banaadir 9th March 2020 103
Ciidamada Daraawiishta Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa howlgal qorsheysay deegaanno dhowr ah oo katirsan Gobolka Jubada hoose, waxaana saraakiisha ciidamada hogaamineysa ay sheegeen in ujeedka howlgalkoodu uu yahay xaqiijinayo ammaanka deegaanada Maamulkaas.
Waxa ay intaa ku dareen saraakiisha in ciidamada Daraawiishta Jubbaland in aysan jirin waxyeelo kasoo gaartay inta ay ku guda jireen Howlgalka ay ka sameynayeen deegaanada Beer-Xaani, Qudus, Kaamjaroon iyo Janaay Cabdallle.
Ciidamada Daraawiishta Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay dhaq-dhaqaaqyo ciidan ka waday qaybo kamid ah Gobolada Jubbooyinka oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo maalin kahor ka hadlayay furitaanka kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka waxa uu sheegay in ay ka go’an tahay gacan ku dhigista Magaalada Bu’aale oo ah Xarunta Jubbaland balse uusan waligii ku shaqeyn Maamulka.
Maamulka Jubbaland ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen Xarunta Jubada Dhexe oo dhanka kale ah Caasimadda Dowlad Goboleedka, go’aankaan waxa uu qayb ka ahaa ballanqaadyadii Axmed Madoobe uu ka sheegay Doorashadii ka dhacday Kismaayo.
Ciidamada Jubbaland ayaa ku sugan Magaalooyin waa weyn ee katirsan Gobolka Jubada Hoose, balse waxaa yar isu gudubka degmooyinka sabab la xiriirta weeraro iyo qaraxyo ay kala kulmaan Al-Shabaab.